Atileet Firaa’ol Eebbisaa: ‘Waggaan torba umurii kiyyarraa akka gubatettiin yaada’ - BBC News Afaan Oromoo
Image copyright MANNHEIM24
Goodayyaa suuraa Atileet Firaa'ol maaraatoonii Maanhayin [Mannheim] kan bara 2019 injifachuun badhaasa dur dhorkame argateera
Atileet Firaa'ol Eebbisaa waggoota torban darbaniif biyyoota Awurooppaa sadii; Beeljiyeemii, Jarmaniifi Faransaayitti baqataa ta'e rakkoo keessa darbeera.
Nutis Guyyaa Baqattoota Addunyaa Caamsaan 20 kabajamu sababeeffachuun atileetiiFiraa'ol Eebbisaa waliin turtii taasifneerra. Innis waggoota torna darbaniif biyyoota sadii keessatti sadarkaa baqataatiin jiraachuusaa BBC'tti himeera.
Atileet Firaa'ol Eebbisaan bara 2011tti ture kan biyyaa bahe. Akka inni jedhutti sababa siyaasaatiin qannaaf saaxilame.
Atileetin kuni erga biyyaa bahe biyyoota garaa garaa sadii keessatti jiraateera. Garuu, waraqaa eeyyamaa ittiin jiraatan argachuu dabalatee rakkoo hedduu keessa darbuu hima.
Inumaa, ''Osoo waraqaa hin argatiin dura baay'een hubame,'' jedha.
Wanti Hayilee G/Sillaasee dhiibbaa dhiigaaf saaxile maali?
Firaa'ol jalqaba Beeljiyeemin koolu galtummaa gaafate. Osoo hin argatin garuu waggoota sadiif keessa jiraate. Yoo gara xumuraa ta'e malee gara caaluuf fiigicha Itoophiyaa keessa fiiguu itti dhiisee ture. Kunis, haalli mijataa waan hin turreefi jedha.
''Jarmaniin deemudhaaf yeroon jedhu jiini sadan tokko yoggaa na hafuu kaachuun jalqabe. Malee, saniin duratti guutummaa guututti hin kaanne,'' jechuun hima.
Beeljiyeem yeroo turetti kaampii baqattootaa keessa jiraataa ture. Achis mijatu dhabnaan imalli gara biyya ollaa Beeljiyeem, Jarman ta'e.
Akka yaadetti waraqaa eeyyamaa biyya itti baqate keessatti jiraachuu isa dandeessisu argachuu dhabuun isaa yaaddoo keessa isa galche.
Atileet Firaa'ol Jarman keessa waggoota afurif akka baqataatti jiraate. Akkuma Beeljiyeem asittis jireenyii kaampii baqattootaa keessatti ta'e.
Haa ta'u malee, fiigicha ji'a sadii dura Beeljiyeemitti eegale Jarmanitti itti fufe. ''Sana booda addaan hin kunne amma ammaatti,'' jechuun ibsa.
Jarman fiigicha jireenya isaa godhatef mijataa taatus ittiin jiraachuu garuu hin dandeenye.
Kennaan isaa garuu fiigicha qofaa miti. Walaloo barreesuurra darbe ofumaa weellisees beeka.
Akka fakkeenyaattis, bara 2016 fi 2017 wallee qabiyyeen isaa siyaasa ta'eefi ''Ka'i Oromoo loladhu'' akkasumas 'Qeerroo bookkisi ni moota'' jedhu gadhiseera.
Atileetota muraasa mallattoo mormii atileet Fayyisaa Leellisaan erga agarsiisee booda agarsiisan keessaas tokkodha atileetin kuni.
Bosonni Kaale [Calais] Kaaba Faransaayitti argama. Baqattoonnii hedduu kan Itoophiyaafi Ertiraa irraa deeman dabalate bosona kanatti dahoo ijaarrattu.
Garuu, baay'ee rakkisaadha. Sababa kanaaf, shaakala fiigichaa addaan kutuun dirqama itti tahe.
Kaalee dhaquun isaa qaxxaamuraan biyya Ingiliiz seenuuf ture. Garuu hin taane. Turtii ji'a tokko booda gara biyya dura itti baqate, Beeljiyeemitti deebi'e.
'Dorgomanii badhaasa dhabu'
Turtii hammana biyyoota sadii keessatti taasisen hanga waggaa lamaa duraatti, bara 2017, fiiganii galii argachuun rakkisaa ture
Baqataa ta'ani beekumsa yookiin dandeettii addaa yoo hin qabaatin carraan waraqaa eeyyamaa biyya tokko keessa itti jiraatan saffisaan argachuun rakkisaadha. Firaa'olif garuu fiiguun asitti maayii hin baafneef.
Kuni garuu seeraafi adeemsa biyyoonni hordofanin garaa gara. Atileet Firaa'ol yeroo Jarman turetti waan baqataa ta'ef dorgommiiwwan ijoo lama akka hin dorgomne dhorkamee ture.
Kunneenis, shaampiyoonaa kilaboota Jarmaniifi Shaampiyoonaa biyyaalessa kan Jarmaniiti.
Dorgommii gama maanaajarootaa argamu immoo fiiguun dhorkamu baatuus qopheessitoonni dorgommiichaa yeroo itti baqattoota waraqaa hin qabne badhaasa dhowwatanitu jira jedha Firaa'ol.
''Dorgommii maanaajaraan fiigdee qarshii xiqqoo itti argachuu dandeessu akka hin dorgomne, dorgomtellee yoo birrii gaarii fudhatte akka gurraachaan [seeraan ala] hojjettetti ilaalama.
''Fakkeenyaaf, bara 2016 maaraatoonii Maanhayin [Mannheim] Jarmanitti fiigee lammii Keeniyaatti aanee lammaffaa bahus badhaasa guutummaan guututti hin arganne.''
Ta'us, dorgoomiiwwan hunduu wal fakkaataa miti. Yerootti qopheessitoonni dorgommichaa badhaasa itti kennanis ture.
''Namoonni gaarii ta'an tokko tokko maallaqa xiqqoo nuuf kennani. Kuunimmoo nuun kennani dorgommii akkanumaan kaanna. Ana qofaa miti kuni. Akkuma waligalaatti.''
Sababni kanaa, namni waraqaa ittin jiraatan hin qabne mirga guutuu lammiileen itti baqatan qaban waan hin qabneefi. Waraqaa argachuun immoo rakkisaa akka ta'e hima.
Kuni, akka inniis jedhu, atileet Firaa'ol qofaaf miti. Atileetonni Itoophiyaa biroo Awuroppaafi kaan keessatti jiraataniifi kanaan rakkatan jiru.
Firaa'ol Faransaay irraa akkuma Beeljiyeemitti deebi'en ture eeyyama koolu galtumman Beeljiyeem ittin jiraatu kan argate. Kunis, erga baqatee biyyaa bahe waggaa torba booda jechuudha.
''Sababni isaas waa'ee kiyya waan hedduu kan argatan ofuma isaaniiti. Yeroo gabaabaa keessatti naa kennani jechuudha,'' jechuun fiigichaan milkaa'uun isaa kanaaf akka isa gargaare ibsa.
Waa'ee Baamlaak Tasammaa kana beektuu?
Waggaa lama dura eegale eeyyama argaten fiigicha fiigaa ittin jiraataa jira. Sababa kanaaf, dorgommii biyya Jarmanii waggaa lama dura dorgomee qarshii itti dhabe barana injifate qarshii itti argateera.
''Qarshii guddaa jedhamu yoo baate garuu asitti gaariidha nu fayyada.'' Yeroo ammaa koolu galtummaa Beeljiyeem irraa kan argaten magaalaa Luuvan [Leiuven] jiraata.
Kilaba isaa bakka bu'e kan fiigu yoo ta'u ''Carraatu dhiphaadha malee'' biyya Itoophiyaa bakka bu'es fiiguu barbaada jedha.
'Jireenyi baqaa baay'ee ulfaataadha'
''Sababa waraqaa dhabeen xiin - sammuudhaanis waan hundumaanuu baay'ee dararamaan ture'' kan jedhu Firaa'ol namoonni isa waliin baqaarra turan waliin rakkoo seenuus hima.
Keessumaa rakkoo siyaasaa biyya keessa turen walqabate osoo baqaarra jirani wal himachuuniifi adeemsa waraqaa eeyyamaa itti argatan wal danquun akka isa mudate dubbata.
Sababni guddaa Beeljiyeem irraa gara Jarman dhaqes kana ture. Hunda caalaa garuu, waggoota torba baqaan dabarse guddaa akka isa hube.
''Waggaan torba immoo umurii kiyyarraa najalaa gubachuun isaammoo hanga ammaatti na aarsa. Kuni waan laayyoo miti. Kanatu baay'ee na hube.''
Ergaa isaatiinis lammiileen akka hin baqanne gorsuun barbaada jedha.
''Amma siyaasaaf jedhameeto namni biyyaa bahu jechuun dogongora guddaadha. Nama kamiyyuu taanaan nama keenya akka baqatanif hin gorsu.''
Firaa'ool Eebbisaa eenyu?
Dhaloota: Shawaa Kaabaa, Sandaafaa
Kilaba: Yeroo biyya ture kilaba Baankiif yeroo muraasaaf fiigeera
Atileetota Fayyisaa Leellisaa booda mallattoo diddaa agarsiisan keessaa tokko
Fageenya 10KM irraa eegale hanga maaraatoonii ni fiiga
Akka inni jedhutti sababa siyaasaaf bara 2011 Beeljiyeemitti baqate
Kaampii baqattootaa Beeljiyeem, Jarman akkasumas yeroo gabaabaaf Faransaay keessa tureera
Amma koolu galtummaan Beeljiyeem keessa jiraata
Baqataa ta'es ''wallee qabsoo'' lama sirbeera
Waancaa Addunyaa 2018: Amna murteessaa kubbaa miilaa Itoophiyaa Baamlaak Tasammaa